जीतगढी विजय उत्सवका ९ तस्बिर- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ७, २०७६ अमृता अनमोल, घनश्याम गौतम
बुटवल — नेपाल स्वाधीन रहेको इतिहास विश्वभर फैलाउन भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार दोस्रो जीतगढी विजय उत्सव मनाएको छ । जीतगढीमा युद्धको नेतृत्व गरेका कर्णेल उजिरसिंह थापालाई सलामी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट ५२ फिट उचाईको टावरमा राष्ट्रिय झन्डाको झण्डोत्तलन र ८ फिटको कर्णेल उजीर सिंहको पूर्णकदको सालिकको अनावरणसमेत गरिएको थियो । झाँकीसहितको र्‍यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ १६:४३
कार्यक्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, मन्त्रीहरु, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललगायतको सहभागिता थियो । वि.सं. १८७२ वैशाख ७ गते बुटवलको जितगढी किल्लामा तत्कालीन पाल्पाका सेन राजाले अंग्रेज फौजविरुद्ध युद्ध गरेका थिए । कर्णेल उजिरसिंह थापा नेतृत्वको फौजले नुवाकोटको डाँडाबाट सुरुङ बनाएर बुटवलको तिनाउ नदी छेउमा गढी बनाएका थिए । त्यही फौजले १८७१ देखि सुरु भएको पटक पटकको आक्रमण सामना गरेर वि.सं. १८७२ वैशाख ७ गते विजय गरेको थियो ।
अंग्रेज सेनालाई हराएपछि यो गढीको नाम जितगढी रहेको हो । तत्कालीन समयमा नुवाकोट गढी, सिम्रन गढीलगायत नेपालका सात स्थानमा अंग्रेजविरुद्ध युद्ध भएको थियो । त्यसमध्ये नेपाली फौजको जित भएको जितगढी मात्रै हो ।
दमौली — तनहुँ भिमाद-१ जुकेपानीमा जिप पल्टँदा आठ यात्रु घाइते भएका छन् ।
भिमादबाट आधामारा जाँदै गरेको ग १ ज ६५२५ नम्बरको जिप पल्टँदा आठ जना यात्रु घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । घाइते सबै यात्रुको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि पठाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ १६:३०